Archive du 06-avril-2022
Tsy milamina intsony ny MAPAR Misy depiote mitady hivadika amin-dRajoelina
Misamboaravoara ny toe-draharaha politika ao anatin’ny Fitondrana sy ireo heverina fa mpiara-dia amin’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina.
Anatry ny ho avy !
Toa tapi-dalan-kaleha tahaka ny sokina nanani-bato ny Fanjakana anketriny, tototry ny olana sy ny fahasahiranana. Tsy manana vahaolana firy, fa ny eo tsy miravona ary ny hafa miforona ihany koa.
ANGOVO NOKLEARY MANDALO KRIZY GOAVANA
Niakatra hatrany amin’ny 40% ny vidin’ny Uranium, izay akora fototra ilaina amin’ny famokarana angovo nokleary, fiakarana midangana indrindra taorian’ny faharavana nateraky ny loza tao Fukushima izay nisy fiantraikany tamin’ny vidiny.
Coronavirus Azo hiaraha-miaina tsara, tsy voatery hihiboka
Mbola tsy foana ny valan’aretina Coronavirus raha araka ny fanazavan’ny dokotera Fidy Bariniaina. Mbola mamono olona an’arivony isan’andro mantsy izany any Eoropa.
Oniversiten’Antananarivo Nangotraka indray ny sakoroka
Nangotraka indray ny grevy teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Nisy ireo andiana mpianatra nitarika ny fitokonana noho ny fisian’ny namany mbola tsy nahazo vatsim-pianarana.
Mpandraharahan’ny Onivesrite Ankatso Nivaly tamin’ny ampahany ny fitakiana
Nitohy tamin’ny grevy faobe nitaky ny karamany sy ny tombotsoany ireo mpandraharahan’ny Oniversiten’Antananarivo na ny PAT (personnel administratif et technique).
Varotra sy fanjifana Entana 5 no noferana ny vidiny
Nilatsaka ny didy famerana ny vidin’entana tena ilaina sy be mpampiasa hihatra ao anatin’ny 3 volana, azo havaozina.
Zaza Ramandimbiarison “Efa tena mamono ny maro an’isa ny tsy fanjarian-tsakafo”
Naneho hevitra momba ny famerana ny vidin’entana ilaina andavanandro (PPN) ny Praiminisitra lefitra teo aloha tamin’ny Fitondrana Ravalomanana ary efa Tale Kabinetran’ny Fiadidian’ny tetezamita.
Antananarivo Renivohitra Ny tsy fahampian’ny fitaovana no mampivangongo ny fako
Tsy misy toerana izay tsy ahitana fako mivangongo eto Antananarivo renivohitra amin’izao. Ho any eny Andravoahangy eny dia saroman’ireo mpivarotra taratasy sy sachet plastika
Jean Eic Rakotoarisoa Nanakiana an-kolaka ny fitondana Rajoelina
Namoaka fanehoan-kevitra misy teboka miisa 3 ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana teo aloha Atoa Jean Eric Rakotoarisoa omaly, tao amin’ny tambazotran-tseraserany.
Liseam-panjakana Mpampianatra 1000 hahazo fiofanana
Vita sonia omaly 05 aprily tao amin’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena Anosy ny Tetikasa « PERFORM», mifototra amin’ny fanomezana fampiofanana eny amin’ny Liseam-panjakana.
Fifanarahana ara-pitaovam-piadiana Namono afo ny Minisitry ny raharaham-bahiny
Namaly ny kiana sy ny tsikera samihafa momba ny toe-draharaha ara-diplaomasia manoloana ilay fifanarahana ara-pitaovam-piadiana amin’ny Rosianina ny Minisitry ny raharaham-bahiny Atoa Richard Randriamandranto omaly.
67 ha Vehivavy iray tratra nangalatra finday
Vehivavy iray manodidina ny 40 taona eo ho eo no no tratra ngalatra finday tamina botika iray tetsy 67ha (akaikin’ny Mada Hotel) omaly.
Politika Ahiana ho vaky ny antoko ny Arema
Raha nisy antoko nanana ny tanjany ara-potokevitra sy olona dia iray amin’ireo antoko tranainy nametraka tantara teto amin’ny Nosy ny antoko Andry sy Rihana Enti-manavotra an’I Madagasikara na AREMA.
ENAM Androhibe Nosokafana omaly ny taom-pianarana vaovao
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly ny taom-pianarana,ho an’ny fampiofanana fototra (Formation initiale) andiany faha-29,
Anosipatrana Basy kilalao no nampiasain’ilay mpamaky trano
Lehilahy iray no nosamborin’ny Polisy miasa ao Ilanivato omaly 05 aprily teny Anosipatrana tokony ho tamin’ny 01 ora maraina rehefa avy namaky trano.
Manandriana Maty nisy namono ilay mpiasan’ny fahasalamana
Mpiasan’ny fahasalamana iray izay fantatra fa lehiben’ny mpiasa ao amin’ny BSD Manandriana, DRSP Amoron’i Mania no maty nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana ny Alahady alina hifoha Alatsinainy teo. T
Taxibe - zotra G Tafakatra 1.500 Ar ny saran-dalana amin’ny hariva
Mihalalina ny fahasahiranan’ny Malagasy. Ankoatra ny fiakaran’ny vidin’ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro izay tsy lazaina intsony dia tena mafy ihany koa ny mahazo ny rehetra amin’ny hafitsoky ny taxibe.
Ambatonapoaka Imerintsiatosika Fasana 3 nisy namaky, razana 16 nanjavona
Mirongatra indray ny vaky fasana any Bemasoandro Ambatonapoaka, kaominina Imerintsiatosika, distrikan’Arivonimamo, lalam-pirenena voalohany.
Mananara avaratra Tratra teo am-panolanana vehivavy ilay lehilahy
Lehilahy iray malaza ratsy amin’ny fanolanana vehivavy any amin’ny distrikan’i Mananara Avaratra no saron’ny mpitandro ny filaminana tao Antanatemoro, Fokontany Tampolo afak’omaly alatsinainy 04 Aprily.
Kaominina Ambohibao Atsimo Hametrahana kianja maitso handinihina ireo asa fampandrosoana
Hiainga eny ifotony ny asa fampandrosoana hotanterahina eo anivon’ny kaominina Ambohibao Atsimo, distrikan’i Manjakandriana manomboka izao.
Lasa sokajiana ho fahavalon’ilay antoko volomboasary ny depiote iray lany tamin’ny antokony rehefa nanambara ampahibemaso ny tsy mety.